Himalaya Dainik » योगेशलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले शुभकामना दिए!
योगेशलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले शुभकामना दिए!
आजै मात्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ । समकालिन राजनितिमा निकै नै आशा गरिएका भट्टराई मन्त्री बने पछि सत्तापक्ष मात्रै होइन प्रतिपक्षबाट पनि योगेशलाइ बधाईको ओइलो लागेको छ ।
भट्टराईका समकक्षी राजनीतिज्ञ नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भट्टराईको सफलता नयाँ पुस्ताको राजनीतिकर्मीहरू प्रतिको आशा र विश्वाससँग जोडिएको भन्दै शुभकामना दिएका छन् ।
फेसबुकमा योगेशलाई मेन्सन गर्दै एक स्ट्याटस लेख्दै गगनले भनेका छन् , दाइ संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा होस् । मन्त्रीको रूपमा तपाईँको सफलता तपाईँ र तपाईँको पार्टीसँग मात्र होइन हाम्रो पुस्ताको राजनीतिकर्मीहरू प्रतिको आशा र विश्वाससँग जोडिएको छ । मुरी मुरी शुभकामना ।
त्यस्तै नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पनि भट्टराईलाई मर्मस्पर्शी शुभकामना दिएका छन् ।
बुधवार फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै भुसालले भनेका छन् कमरेड योगेश भट्टराई, तपाईंलाई बधाई छ । तपाईंले आजसम्म लिएका हरेक ज़िम्मेवारी जुन शानका साथ पूरा गर्नु भएको छ, यो ज़िम्मेवारी पनि त्यही योग्यताका साथ सम्पन्न हुनेछ । हामी आफैंले बनाएका र कबुलेका मूल्यहरूले हामीलाई यहाँसम्म टिकाएका छन् । र, हामी जानुपर्ने टाढा छ ।
यी खालका प्रतिक्रिया र बधाइका सन्देशबाट पनि स्पष्ट हुन्छ की योगेशबाट समकालिन राजनितिज्ञले कति आशा गरेका छन् भन्ने कुरा । चुनौतिलाई स्विकार गरेर मन्त्री पद स्विकारेका भट्टराईले समकालिन र अग्रजहरुबाट गरिएको आशाको धरोहरलाई कति बचाउँन सक्छन् त्यो उनको आगमी कर्मले देखाउँने छ ।
प्रकाशित मिति १६ श्रावण २०७६, बिहीबार ०१:१६